डा.लव कुमार साह द्वारा जनकपुरमा फोक्सोकै विकास नभएको बच्चाको ज्यान जोगाउनमा अग्रसर | अपन जनकपुर
डा.लव कुमार साह द्वारा जनकपुरमा फोक्सोकै विकास नभएको बच्चाको ज्यान जोगाउनमा अग्रसर
अप्पन डेस्क,जनकपुरधाम १० माघ । जनकपुरधाम उप महानगरपालिका वडा नम्बर ९ आदर्श नगर निवासी प्रियंका कुमारी गर्भवती थिइन् । माघको अन्तिम साता उनको बच्चा जन्मिने तिति निर्धारण गरिएको थियो ।
उनको परिवार प्रसुतीका निम्ति तयारीमा जुटेका थिए । तर एक महिना अगाडि नै प्रियंकालाई दुखाई शुरु भयो । दुखाई सँगसँगै सालनाल पनि निस्केर रक्तश्राव हुन थालेपछि गत पुस २६ गते उनलाई काव्य अस्पताल ल्याइयो ।
अस्पताल ल्याइएपछि तत्कालै शल्यकृया गरी शिशु निकालियो । निकालिएका शिशु (छोरा) को स्वास्थ्य अवस्था भने खतरापूणर् थियो । साँस लिनै नसक्ने अवस्थामा रहेका बालक बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्ने अवस्था देखियो ।
समय नपुगेर जन्मिएका ती बच्चालाई साँस लिन कठिनाई भइरहेका बेला उनको ज्यान चिकित्सकको सहयोगमा जोगिएको छ ।
३४ हप्तामै जन्मिएका बालकको फोक्सोको समेत विकास नभएको अवस्थामा साँस फेर्न गाह्रो थियो । ती बच्चालाइ भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो । तर, बाल रोग विशेषज्ञ डा. लव कुमार साहले शुरुदेखि नै उपचार गरेर बच्चाको ज्यान जोगाएका छन् ।
‘महिना नपुगेर जन्मिँदा साँस लिन समस्या हुन्छ । त्यत्तिबेला फोक्सोको विकास भएको हुँदैन्’ डा. साह भन्छन्, “त्यस बेला उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । तर न्यूनतम प्रयासमै बच्चा सामान्य अवस्थामा आएका छन् ।” डा. साहका अनुसार काठमाडौंबाट कृत्रिम साँस लिने सरफेक्टेन्ट मगाएर लगाएपछि न्यूनतम अक्सिजन र न्यूनतम मेसिनमै बच्चा सामान्य अवस्थामा आएका छन् ।
जन्मिएका बच्चाको तौल पनि २ किलो ३ सय ग्राम मात्रै थियो । जबकी जन्मिएको शिशुको तौल कम्तीमा अढाई किलोमाथि हुनुपर्दछ । तर, उपचार गर्दा तौल पनि सुधार भएको डा. साहले बताए ।
साहका अनुसार सामान्य अवस्थामा आइसकेको बच्चालाई शनिबार डिस्जार्च गर्ने तयारी भएको छ ।
खतरापूणर् अवस्था रहेको शिशुको ज्यान जोगाएकोमा शिशुका पिता विकास भारद्धाजले डा. साहलाई धन्यवाद दिएका छन् । ‘साँच्चिकै बच्चाको अवस्था धेरै खराब थियो’ उनले भने, “तर डा. साबले जोगाइदिनुभएछ । उहाँलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ ।”